Gamescom 2021: hofori makumi matanhatu, 60 indie vagadziri - yakawanda mitambo - mutambo poindi - bhodhi mitambo nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Aug 24, 2021 | Gamescom muCologne, nhau, Vhidhiyo mitambo
Vhiki rino rinotanga: Gamescom 2021 inotanga zviri pamutemo muna Nyamavhuvhu 25 na20 pm (CEST) nehombe yekuvhura show Gamescom: Kuvhura Husiku Hupenyu. Vanoronga Koelnmesse nemutambo - Association of the German Games Industry vakazivisa mamwe mashoko nhasi nguva pfupi isati yatanga chiitiko chikuru pasi rose chekombiyuta nemavhidhiyo mitambo uye vakapa mhedziso yepurogiramu yose.
Pahubhu yemukati Gamescom ikozvino Mafeni anogona kutonyoresa mahara izvozvi uye kuwana zviziviso zvese, nhau uye zvakakwirira munzvimbo imwechete kubva kutanga kweGamescom 2021.
Mukuru wemutambo Falk: "Yave kutanga zvakare"
Vanosvika makumi matanhatu makuru epasirese vaparidzi nevagadziri vari kutora chikamu sevabatsiri veGamescom 60: Vanozviratidza nemazita avo emitambo mitsva zvakanyanya kuGamescom uye pamusoro pezvose paGamescom izvozvi. Chiratidzo chakasimba cheGamescom's digital concept: Kuenzaniswa negore rapfuura, nhamba yemakambani makuru yakapetwa kaviri. Mumavhiki mashoma apfuura, vamwe vamiriri vanozivikanwa veindasitiri yemitambo vakabatana navo, kusanganisira: Amazon Games, Epic Games, Humble Games, Konami Digital Entertainment BV, Nekki, Netmarble, Pearl Abyss, Sharkmob AB (Tencent Games), Techland. uye Warner Bros. Mitambo. Makambani akadai seActivision, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Electronic Arts, Koch Media, SEGA Europe, Ubisoft, Wargaming neXbox vanga varimo kubva pakati paChikunguru.
Felix Falk, Maneja Director wemutambo - Sangano reGerman Games Indasitiri eV, anoti: “Yave kutanga zvakare: Gamescom 2021 ndiko kutanga kwechiitiko icho nharaunda yemitambo yepasi rose iri kutarisira. Neruzivo kubva gore rapfuura, isu takawedzera zvakanyanya kuvandudza pfungwa yedhijitari yeGamescom. Kunyangwe Gamescom ikozvino, iyo Gamescom Shows, yedu itsva Gamescom EPIX mushandirapamwe kana akawanda mishandirapamwe neGamescom vanobatana: Kubva Nyamavhuvhu 25, vatambi pasi rese vanogona kutarisira kumazuva azere nezviziviso, nhau nehurukuro nezvemitambo inotarisirwa.
Kuwedzera kune vanosvika makumi matanhatu evashambadziri vakuru nevagadziri, kune mazana maviri nemakumi mashanu evagadziri veindie vanozviratidza munyika chaiyo yeIndie Arena Booth Online (IAB Online). 60 curated mitambo yepamusoro icharatidzwa pahombe, matumba chaiwo. IAB Online yakabatanidzwa chete muGamescom izvozvi.
Nekuda kweCorona: Gamescom yakapedzisira kuitirwa panzvimbo muna 2019. Mufananidzo: Volkmann
Zvakare nekutarisa kune midhiya uye kusvika kune vanobatana vanotakura zvirimo uye zviratidzo zveGamescom pasi rese, kune vamwe (vepasirese) vatsva, kusanganisira: Bilibili (CN), CHIP.de (DE), Douyu (CN), eSports1 / Sport1 (DE), Fomos (KR), Game Bonfire (CN), Games.cz (CZ), GamesMarkt (DE), GameStar (HU), Gry-Online.pl (PL), Huya (CN), INVEN ( KR), JaRock (PL), Merlin'in Kazanı (TR), Play4UK (UK), Ruliweb (KR), SECTOR (SK), Wehype (including SE, DK, NO).
“Gamescom ndicho chiitiko chenharaunda yepasi rose yemitambo. Naizvozvo ndinofara zvikuru kuti, kune rimwe divi, takabudirira kuwedzera chikamu chekunze pakati pemakambani atinoshanda nawo gore rino kusvika pa75% kana zvichienzaniswa negore rapfuura - neizvi tiri kuratidza mufananidzo wekunze kwenyika Gamescom ikozvino. Nekune rimwe divi, ndinofarawo kuti tinokwanisa kugara tichiunza zviri mumakambani aya kunharaunda yemitambo yepasi rose nekuda kwevazhinji, vezvenhau vepasi rese uye vanosvika vatinoshanda navo. Saka pfungwa yedu iri kushanda, "anodaro Oliver Frese, Managing Director uye COO weKoelnmesse.
Nenzira: Pamusoro pevadyidzani vatotaurwa, nharaunda inogona zvakare kutarisira kune imwe kana maviri zvinoshamisa. Vamwe vanobatana vanozoziviswa chete nekutanga kwe Gamescom: Kuvhura Husiku Hupenyu.
Nyowani gore rino: Gamecom Epix
Iyo Gamescom EPIX nharaunda chiitiko, iyo yakatangwa kuGamescom 2021 kekutanga, yakatokanda chitsinga panharaunda: Pakutanga zviri pamutemo Gamescom 2021 muna Nyamavhuvhu 25, nharaunda ingangove yakatopedza gumi nemashanu ekutanga quests izvo inorarama mascot EPI iri pasi now.gamescom.de nguva dzose inomira. Gamescom VAULT inozovhura nemitengo yekutanga. Kune mamwe gumi nemashanu quests panguva Gamescom. Kana mabasa ese apera, Gamescom VAULT inovhura zvakare uye inoratidza mibairo mikuru kubva kune vanobatana makumi matatu.
Cosplay uye retro zvagara zviri zvikamu zvakakosha zveGamescom. PaGamescom 2021, nzvimbo mbiri idzi dzichabatana nemauto kupa vateveri chirongwa chekuratidzira chisingaenzaniswi. Musi waNyamavhuvhu 26 na27, iyo chaiyo cosplay musha unovhura rukova mhenyu nemacosplays, mimhanzi, arts & props uye akasiyana maworkshops kubva 12:00 kusvika 17:30 (CEST).
Muchikamu chechipiri chezuva, mutambo unoenderera mberi nemazuva ese kubva 17:30 p.m. kusvika 22:30 p.m. (CEST) nevagadziri vemitambo, vateresi, mafeni, vagadziri vemitambo yekare pamwe nemitambo mitsva yemazuva ano retro Style. Iyo yese yekufambisa chirongwa inowanikwa kune vateveri mahara paGamescom izvozvi.
Zvakare zvinofanirwa kune iyo chaiyo yedhijitari chiitiko: Cosplay. Mufananidzo: Volkmann
Kana iwe usingakwanise kuwana yakakwana ye cosplay, gore rino iwe zvechokwadi uchafadzwa neyechipiri, yakanyatso dhijitari edition yeGamescom cosplay makwikwi. Mumavhiki mashoma apfuura michina yekusonesa yanga ichipisa zvakare, zvifukidziro zvakakura zvakaitwa, mifananidzo inonakidza yakatorwa uye zvino makumi maviri ekupedzisira emakwikwi eGamescom cosplay 20 akatemerwa. Sarudzo yemahara yevakundi vegore rino muzvikamu zvitatu zvakasiyana ichatepfenyurwa paGamescom izvozvi Nyamavhuvhu 2021 kubva 27:21 p.m. (CEST).
Koelnmesse uye mutambo Association yakatanga iyo gamecom sango reGamescom 2020. Chinangwa: Pamwe chete nenharaunda, kubatsira kuvandudza masango eGermany akatyisidzirwa uye kuita mupiro mukurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Muna 2020 zvaive zvatove kuita kuvandudza 12.000 m², yegamescom 2021 sango rinofanira kukura kusvika pamusoro pe15.000 m². Chero ani zvake anogona kutora chikamu pane inotevera link nemupiro weimwe euro kana kupfuura: https://gamescomforest.betterplace.org.
Kutangwa zviri pamutemo kwegamescom 2021 muna Nyamavhuvhu 25 na20:00 p.m. (CEST) ndiyo hombe yekuvhura show gamescom: Kuvhura Husiku Hupenyu naGeoff Keighley, umo mitambo inopfuura makumi matatu inotarisirwa kupisa icharatidzwa. Musi waNyamavhuvhu 30 uye 26th, iyo yeGerman- uye Chirungu-inotaura gamescom studio ichapa vateveri matirailer matsva, akaridza demos, kubvunzurudza uye zvakawanda zvinoshamisa. Musi waNyamavhuvhu 27, iyo gamescom: Awesome Indies show icharatidzawo mazita anonakidza kubva kune vakazvimiririra vanogadzira. Musangano weGamescom congress, musangano mukuru muEurope pamusoro pekugona kwemitambo yemakomputa nemavhidhiyo munyika ine digiti, uchaitwawo musi wa26 na26 Nyamavhuvhu.
Mumazuva ese eGamescom, vashanyi veGamescom ikozvino vanowana zvitsva zvemukati - senge mufananidzo uye vhidhiyo zvinhu pamitambo mitsva - kubva kune gamecom mudiwa. Ivo vanobatana vachatepfenyurawo yavo mhenyu nzizi uye voonekwa mumitambo yemitambo. Kubva Nyamavhuvhu 25 uye mukupera kwesvondo, vateveri veindie vanogona zvakare kuongorora nyika chaiyo ye "Summer Camp of Doom" paIndie Arena Booth Online nemavatars avo. Cosplay uye mafani eretro achawana kukosha kwemari yavo neakazara-azere emazuva anoyerera musi waNyamavhuvhu 26 na27.
Iyo gamecom 2021 chiitiko chinotenderedzwa nechirongwa chinotsigira cheakasiyana midhiya uye kusvika kune vanobatana. Semuyenzaniso, Rocket Beans TV, Freaks 4U Gaming uye INSTINCT3 vari zvakare zvakare pamwe chete kuronga "Game Evasion". Wepamusoro streamer Gronkh, Papaplatte uye Trymacs vari kubatana seSPIELESAUSE kekutanga. Mazhinji evasiki network uye mapuratifomu epamhepo zvakare anofambisa uye kutaura pane iyo gamecom inoratidza mumitauro yakasiyana.
WWE GVJ18 - Chiito Figures 2-Pack (15 cm) Ric Flair vs The ... * 95,29 EUR tenga
Kare NBA 2K22: Mwaka unounza mibairo uye "Chishanu Chekutanga"
Inotevera Poker geeks cherechedza: Aya ndiwo akanakisa YouTube chiteshi che poker tricks
[Kushambadzira] Kubhejera kwepamhepo: munhu anofungidzirwa kuti mudiki anobuda akakura
Mazano eMutambo: Madden NFL 21 Gaidhi - Maitiro Ekusimudzira Mutambo Wako
Zera reEmpires 4: Nhau dzinonzi dzichava Mwedzi Unotevera
Yepamusoro gumi mitambo yebhodhi: "Inonyanya kudiwa" yakatenderedza SPIEL.digital